परिचय पत्र अभिभावकको, सिकाइ राम्रो विद्यार्थीको | नुवागी
एक छेउमा महिला र अर्को छेउमा पुरुषको तस्विर टाँसिएको कार्ड । त्यसमा लेखिएको थियो, विद्यार्थीको नाम, कक्षा र अभिभावकको नाम । साथै त्यसको तल अभिभावकको नातामा लेखिएको थियो, बुवा र आमा । कार्डको माथिल्लो भागमा निलो बोर्डरको भित्र सेतो रङमा ठूलो अक्षरमा लेखिएको थियो, ‘अभिभावक परिचयपत्र’ ।
विद्यालयले विद्यार्थीको परिचयपत्र बनाउनु सामान्य कुरा हो तर ती विद्यार्थीका अभिभावकको परिचयपत्र बनाएको सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ । ललितपुरस्थित च्यासल श्रमिक शान्ति माध्यमिक विद्यालयले विगत ४ वर्षदेखि अभिभावकलाई पनि परिचय पत्र बनाएर दिने गरेको छ । विद्यार्थीको सहि अभिभावकसँग सहकार्य गरी उनीहरूबाट विद्यार्थीमा सकारात्मक सुधार ल्याउने उद्देश्यले श्रमिक विद्यालयले अभिभावक परिचयपत्र बनाउँदै आएको छ ।
जनकपुर घर भई हाल ललितपुर बालकुमारी बस्ने सुमनबहादुर मल्ल २ वर्षअघि आफ्नो छोरालाई श्रमिक विद्यालयमा भर्ना गर्न जाँदा विद्यालयले उनको पनि परिचयपत्र बनाउन पर्छ भन्दा उनी आश्चर्यमा परेका थिए । अन्य विद्यालयमा बच्चा पढाउँदा विद्यालयले आफ्नो छोराको परिचयपत्र बनाएको मात्र देखेका उनले आफ्नो र श्रीमतीको पनि परिचयपत्र बनाउन पर्छ भन्दा छक्क परेका थिए । छोराको नतिजा लिन जाँदा र विद्यालयको विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदा उनी आफ्नो अभिभावक कार्ड लिएर मात्र विद्यालय जाने गर्छन् । अभिभावक परिचयपत्रले विद्यालयमा अनावश्यक मान्छे छिर्न नपाउने हुँदा यस्ता कार्ड सबै विद्यालयले बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
उनी मात्र होइन अर्का अभिभावक प्रशंसा राजवंशी पनि विद्यालयले अभिभावक कार्ड बनाएकोले गर्दा बच्चाहरू सुरक्षित रहने बताउँछिन् । युकेजी कक्षादेखि आफ्नी छोरीलाई सो विद्यालयमा पढाउँदै आएकी राजवंशी भन्छिन्, ‘अहिलेको समयमा विद्यालयमा मेरो बच्चा लिन आएको भन्दै गलत अभिभावक बनेर आउने व्यक्ति र त्यसबाट बच्चाका धेरै नराम्रा घटना भएको सुनिरहेको सन्दर्भमा विद्यालयले अभिभावक परिचयपत्र बनाई सम्बन्धित अभिभावकलाई मात्र बच्चा जिम्मा लगाउँदा त्यसले राम्रो वातावरणको सृजना गर्छ ।’ उनी भर्नाको समयमा, नतिजा लिन, खाजा पुर्याउने सन्दर्भमा र कहिलेकाही छोरीको पढाइ बुझ्नको लागि अभिभावक परिचयपत्र बोकेर विद्यालय प्रवेश गर्छिन् ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक सानुलाल व्यञ्जनकार विद्यार्थीले बढी समय आफ्नो घरमा बिताउने हुँदा विद्यालयले अभिभावकसँग सहकार्य नगरी विद्यार्थीलाई मात्र पढाएर नहुने भन्दै अभिभावकलाई अभिभावकत्व महशुस गराउन पनि अभिभावक परिचयपत्र बनाएको बताउँछन् । साथै सहि अभिभावक विद्यालयसँग नजोडिँदा सिकाइ उपलब्धिमा हस आएको महशुस भएपछि वि.स. २०७२ सालबाट अभिभावक परिचपत्र बनाउन सुरु गरेको उनले जानकारी दिए ।
सो विद्यालयमा अधिकांश विद्यार्थी जिल्ला बाहिरका छन् । विद्यालयको नतिजा लिनको लागि अभिभावकको उपस्थिति अनिवार्य गरेको नियममा विद्यार्थीले नक्कली अभिभावक ल्याएकोमा दिक्क भएका थिए उनी । ‘उनीहरू नतिजा लिनको लागि भनेर आफ्ना चिनजानका व्यक्तिहरूलाई लिएर आउने गर्थे, जुन उसको वास्तविक अभिभावक नभई आफ्नो घरबाट कति दुरी टाढा बस्ने चिनजानका व्यक्ति मात्र हुन्थे । र अभिभावक भन्दै उसको नतिजा कागज लिएर जाने गर्थे । त्यस्ता नक्कली अभिभावकलाई हामीले जतिसुकै सुझाव र गुनासो पोखेपनि ‘हुन्छ’ भन्ने जवाफ त आउँथ्यो तर सुधार आउँदैन थियो । सुधार आवस् पनि कसरी? जब त्यो व्यक्तिलाई विद्यार्थीको विषयमा थाहा पनि हुँदैनथ्यो र उसको घरसम्म हामीले भनेका कुराहरू पुगेको हुँदैनथ्यो । अधिकांशले नतिजा लिन सधैँ एउटै नक्कली अभिभावक बोकेर ल्याउने गर्थे जसले गर्दा उसको सम्बन्धित अभिभावक हो या होइन भनेर शंका गर्ने वातावरण नै रहँदैनथ्यो ।’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै थपे, ‘तर केही विद्यार्थीले यतिसम्म गर्न थालेका थिए कि फरक परीक्षाको नतिजा लिन फरक अभिभावक बोकेर आउने । दुई जना विद्यार्थीको नतिजा लिन एउटै अभिभावक केही समयको अन्तरालमा आउने गर्थे ।
विशेषगरी अभिभावकले विद्यार्थीको परीक्षा नतिजा लिन आउँदा विद्यालयले अभिभावक कार्ड अनिवार्य गरेको छ । अभिभावक परिचयपत्रले गर्दा सहि अभिभावकलाई विद्यालयको नजिक ल्याएर अभिभावकविद्यालय सहकार्यमा सहज बाटोको सृजना गरेको प्रअ व्यञ्जनकार बताउँछन् ।
एक पटकको घटना हो, एउटा अभिभावकले आफ्नै बच्चाको नतिजा लगेर गएपछि फेरी अर्को बच्चा, उनको बच्चाको साथीको नतिजा लिनको लागि सोही अभिभावक आएका थिए । मैले उनलाई भनेँ, ‘तपाईले अन्य अभिभावकका बच्चाको रिपोर्ट लगेर हामीले भनेका सबै कुराहरू उसको अभिभावकलाई गएर भन्नसक्नु हुन्छ? र हाम्रा यस्ता प्रश्नले केही अभिभावकहरू नक्कली अभिभावक बन्न निरुत्साहित पनि भएका थिए । अभिभावक कार्ड बनाउनुअघि हाम्रो विद्यालयमा करिब ५० प्रतिशत विद्यार्थीले नक्कली अभिभावक बोकेर ल्याउने गर्दथे ।’
नक्कली अभिभावक केबल नतिजा लिन मात्र आउने तर अभिभावक बैठक वा कार्यशाला जस्तो लामो समय बस्न पर्ने कार्यक्रमहरूमा अनुपस्थित रहने त्यहाँका शिक्षकहरूले बताए । विद्यार्थीले नक्कली अभिभावक लिएर आउने समस्याले बढ्दो रुप लिएपछि विद्यालय परिवारले यसको समाधानका लागि छलफल गरी अभिभावक परिचयपत्र बनाइदिने निष्कर्ष निकालेको हो । विद्यालयले विद्यार्थी सम्बन्धित केही कार्य गर्दा अभिभावकसँग कुराकानी गर्ने गरेको छ । यो कार्ड बनाउनुअघि पनि विद्यालयले अभिभावकसामू सो योजना राखेर अनुमोदन गरेर मात्र लागु गरेको विद्यालयका प्रिन्सिपल व्यञ्जनकारले बताए ।
एउटा मात्र अभिभावकलाई परिचयपत्रमा समावेश गरिँदा कुनै समयमा सो एक व्यक्ति अनुपस्थित हुन सक्ने भएकाले विद्यालयले दुई जना अभिभावकलाई परिचयपत्रमा समेटेको छ । जसले गर्दा एकजना व्यस्त रहँदा पनि अर्को अभिभावकलाई विद्यालयमा सम्पर्क गर्न सहज भएको अभिभावकहरू बताउँछन् ।
अभिभावक परिचयपत्रमा कसको नाम राख्ने सन्दर्भमा उनी भन्छन्, ‘अभिभावक कार्डमा नाम राख्दा हामी सो विद्यार्थीभन्दा बढी उमेर को नाता पर्नेलाई छनोट गर्छौँ । सकेसम्म विद्यार्थीको पढाइलाई हेर्नसक्ने र विद्यालयले बोलाउँदा उपस्थित हुन सक्ने अभिभावक छनोट गर्छौँ । विद्यार्थी भर्ना समयमा नै हामी उहाँलाई घरमा राम्रो हेर्ने कोही हुनुहुन्छ भनेर सोध्ने गर्छौँ । पहिलो प्राथमिकतामा बच्चाको आमाबुवा नै पर्ने गर्दछन् । तर कुनै परिवारमा आमाबुवा अशिक्षित छन् र उनीहरूका अर्का ठूलो सन्तान शिक्षित भएको खण्डमा ती ठूला सन्तानलाई हामी अभिभावकको रुपमा राख्ने गर्छौँ । हामीले दिएको सल्लाहबमोजिम बालबालिकालाई घरमा हेरचाह गरिदिँदा बच्चामा सकारात्मक परिवर्तन आउन मद्दत गर्छ र उहाँहरूले पनि विद्यालयमा आएर आफ्ना गुनासाहरू सुनाउन सक्नुहुन्छ । कसैको त्यसरी हेर्ने व्यक्ति नभएको अवस्थामा बच्चा जोसँग बस्छ उहाँहरूकै नाम राख्छौँ ।’ शिक्षित र समय दिन सक्ने अभिभावक छनोटले बच्चाको व्यवहार र पढाइलाई राम्रो बनाउन सहज हुने उनको सोच छ ।
घरका वातावरणका कारण बच्चामा समस्या देखिने र घरका नराम्रो व्यवहार भएकै कारण विद्यालयमा पनि उनीहरूले त्यस्तै व्यवहार गर्नेे र त्यसमा अभिभावकहरू सचेत नभएकोमा उनले गुनासो पोखे । विद्यालयले शैक्षिक रुपमा नै विद्यार्थी के के कुरामा कमजोर छन् र उनीहरूलाई घरमा हेर्नुपर्ने कुराहरू औल्याउँदै अभिभावकहरूसँग कुराकानी गर्छ र विद्यालयमा बच्चाको व्यवहारका बारेमा अभिभावकलाई जानकारी दिने गरेको छ । समय मिलेसम्म १५ दिनको एक पटक वा मासिक रुपमा अभिभावकले आफ्नो बच्चाको विषयमा छलफल गर्न विद्यालय आउनुपर्ने उनको सुझाव छ । विद्यालयलाई वर्षको कम्तीमा ७ दिन पनि समय दिन नसक्ने अभिभावकले गर्दा उसको बच्चाको पढाइमा सुधार ल्याउन असहज हुने उनले बताए ।
कुनै विद्यार्थी विद्यालयमा अनुपस्थित भएमा पहिलो घण्टी सकिएपछि कक्षा शिक्षकले उसको अभिभावकलाई फोन गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा अभिभावकले विद्यार्थी विद्यालय गएको या विद्यालय पोसाकमा अन्त कतै गएको भन्ने विषयमा जानकारी पाउन सक्छन् । त्यस्तै अभिभावकलाई विद्यालयमा समयमा आउनुपर्ने महत्वको भावना जगाउन विद्यालयले परीक्षाको नतिजा लिन निर्धारित समयमा नआउने अभिभावकको लागि नगद रु ५० जरिवाना लगाउने गरेको प्रअ व्यञ्जनकार बताउँछन् ।
विशेषगरी अभिभावकले विद्यार्थीको परीक्षा नतिजा लिन आउँदा विद्यालयले अभिभावक कार्ड अनिवार्य गरेको छ । अभिभावक परिचयपत्रले गर्दा सहि अभिभावकलाई विद्यालयको नजिक ल्याएर अभिभावकविद्यालय सहकार्यमा सहज बाटोको सृजना गरेको प्रअ व्यञ्जनकार बताउँछन् । सहि अभिभावकले विद्यार्थीको पढाइ र उसको विद्यालयको व्यवहार र गतिविधिको बारेमा जानकारी पाउँदा धेरै अभिभावकले सुझाव दिएका बमोजिम घरमा बच्चाहरूलाई हेरचाह गरेकोले गर्दा उनी अभिभावक कार्ड बनाएकोमा सन्तुष्ट छन् ।
अभिभावक परिचयपत्र निर्माण पछि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा पनि सुधार आएको र विद्यार्थीको पठनपाठन र अनुशासनको विषयमा अभिभावकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्दा त्यसले बालबालिकामा केही परिवर्तन भएको उनको अनुभव छ । उनले मुस्कुराउँदै भने, ‘अभिभावक परिचयपत्र बनाएपछि विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि पनि बढेको छ । सहि अभिभावकसँग सहकार्य गरी उनीहरूमा अभिभावकत्वको भावनाको विकास भई एसईईको परीक्षाको नतिजामा पनि राम्रो भएको छ । यो वर्षको एसईईमा एक जना विद्यार्थीले ३.९५ जिपिए ल्याउन सफल भएको छ ।’
प्याब्सन सूर्यविनायकको प्रथम वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
कोबिदाका विद्यार्थी राष्ट्रिय पोशाकमा